Dhir | December 2019
Editor Ee Doorashada December 10,2019
Ugu Weyn Ee Dhir
Sida loo abuuro oo loo daryeelo dhir guriga
U ogolow in dhirta la koro guriga oo aan ku badbaadin lacag aad u badan, laakiin marwalba waxay qurxin doontaa gudaha iyo miiska adeega cagaarka jilicsan iyo kobcinta suxuunta la diyaariyey oo leh kakamiin fitamiino iyo walxo kale oo faa'iido leh. Dhirta soo koraya: sida loo doorto noocyada beerashada guriga Qodobka cagaarka iyo xawaaraha ah Bisaylkiisa ayaa ah shuruudaha ugu muhiimsan ee lagu doorto noocyada dhirta guriga lagu sameeyey, beeridda taas oo ah dayactirka kaddibna uma baahna daryeel gaar ah.
Miyuu dhir u yahay khudaar ama ma?
Way adag tahay in la helo qof aan jeclayn dhir. Sida caadiga ah, caleemaha basbaaska leh waxay ku xiran tahay ereygan miyir-qabka, laakiin qof kasta oo guri-guri ah ayaa ogyahay in asalka dhirta geedkaan aan ka yareyn oo ka qiimo badan qeybta kor ku xusan, sidaas darteed dhir ayaa mararka qaarkood loo yaqaanaa khudradda, si kaamil ah, dalagga xididka ah. Waa maxay dhaqankaan, waa maxay qaababka qaabkeeda, sida ay uga duwan tahay noocyada kale ee cagaaran - dhammaan waxyaabahan iyo waxyaabo badan oo kale ayaa looga doodi doonaa dib u eegistaan.
Qalabka dawooyinka ee dhirta dhirta iyo isticmaalka daawada dabiiciga ah
Parsley waa mid ka mid ah caleemaha jecel ee ku dhawaad ​​guri walba. Xannuunku wuxuu si fiican u dhammaystiri karaa suxuunta hilibka iyo khudradda iyo kalluunka. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa ogaanaya sifooyinka faa'iidada leh ee asalka ah ee cawska basbaaska, iyo sidoo kale sifooyinka bogsashada ee habab kala duwan ku salaysan. Maqaalkani wuxuu faahfaahin ka bixinayaa sida xididka dhirta u eeg yahay, sida ay u wanaagsan tahay caafimaadka, iyo sida loo sameeyo si sax ah.
Guryaha dawooyinka ee dhogorta dhirta
Dhirta waxaa loo isticmaalaa sida xayawaan loogu talagalay suxuunada kala duwan. Fududyada iyo shaaha ka yimaada waxay keeni karaan faa'iidooyin badan jirka. Haddii aad barato sida guriga loo soo saaro, waxaad ku raaxeysan kartaa cabitaan wanaagsan oo aad ku bogsan kartaa. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan faleebo dhir ah iyo codsigeeduna wuxuu ka hadlayaa maqaalka.
Noocyada isticmaalka dhir sida durayo
Faa'iidooyinka iyo bogsashada guryaha dhirta waxaa sabab u ah noocyo kala duwan oo maadooyin firfircoon oo ka kooban dhamaan qaybaha geedka. Maqaalkani wuxuu u go'ay saameeynta duriinka, oo leh dhirta basbaaska leh. Haddii dhirku yahay maqaarin maqaar ah, waa mid ka mid ah caleemaha saliidda ah ee ugu caansan oo caan ah oo loo isticmaalo cuntooyinka adduunka oo idil si ay u kobciyaan cuntada leh ariishyada basbaaska leh iyo dhadhanka macaan, sidoo kale waa qalabka daawada ah.
Noocyada codsiga barafka barafka leh ee barafka
Naag kasta oo riyooyin ah oo waji ah oo wejiga leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay rabtaa in ay ku bixiso daryeelka iyada ugu yaraan waqti, laakiin si aad u hesho natiijada ugu badan. Xaaladdan, si aad u fiican caawinta koolejka guriga ee wajiga. Gaar ahaan caan waa baraf baraf laga sameeyey biyo saafi ah oo lagu daro geedo yar yar.
Sidee loo beeraa dhir si koritaan degdeg ah?
Ka fikir beerta khudradda ah ee aan lahayn dhir aan ku dhowaan karin, waxaa la koray labadaba wax soo saarka khudaarta cagaaran iyo cagaarka udgoon, taas oo loo isticmaalo hagaajinta dhadhanka suxuunta kala duwan. Sidee si guul leh u koraan dhir on xayawaankaaga duurka ama beerta, sida loo xaqiijiyo biimil fiican oo degdeg ah oo abuur ah, waxaad ka badan kartaa faahfaahin dheeraad ah.
Siyaabaha loola dagaallamo cudurka dhirta iyo cayayaanka
Beeraley kasta oo doonaya in uu helo miro badan oo tayo sare leh, laakiin mar walba ma soo baxdo. Badanaa khudradda waxaa soo weerara cayayaanka ama ay saameysey cudur. Dalaggu wuxuu ka jiraa shilalkan, sidaa darteed waxaad u baahan tahay in lagu hagaajiyo sababaha dhibaatooyinka beerta oo ay awoodaan in ay qaataan tallaabooyin lagu xallinayo.
Sida loo isticmaalo dhir si loogu daaweeyo bararka
Dhirta beerta caadiga ah ee aan caadiga ahayn ma aha kaliya uunbaan ama bixiyaha fiitamiinada iyo mareellada. Waxay ka caawin kartaa astaamaha xun sida bararka. Qalabkan waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed. Waxaan baraneynaa waxa dhirta ay faa'iido u leedahay marka barar, maxay yihiin waxyaabaha ka soo horjeeda isticmaalka, sida loo daweeyo bararka lugaha, isticmaalka.
Guryaha waxtar leh iyo hababka loo isticmaalo abuur dhir
Xitaa Giriigyadii qadiimka ahaa waxay ka warqabeen sifooyinka bogsashada dhir, iyo maanta cagaaran waa caan ku ah meelaha kala duwan ee daawada dhaqanka. Laakiin caansanaantu ma helin miraha geedka this, kuwaas oo inta badan la tuuro ama tagaan si ay u quudiyaan lo'da. Iyo si aan micne lahayn, sababta oo ah ka kooban yihiin waxay ku dhowaad isku mid ah sida caleemo bislaado.
Sida loo joojiyo uurka iyada oo dhir leh marxaladaha hore
Dhir daawooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa in ay marxaladaha hore ee uurka u kacaan kicinta foosha iyo uurjiifka. Dhir ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah geedahaas. Su'aasha ah in tani run tahay iyo haddii ay suurtagal tahay in la keeno ilmo iska soo ridid ​​iyada oo gargaarkeeda lagu soo jawaabayo maqaalkan. Sida dhirku u saameeyo jirka dumarka inta lagu guda jiro uurka Haweenka, gaar ahaan dhallinyarada, waxay jecel yihiin hababka dabiiciga ah ee ilmo soo rididda.
Noocyada beeritaanka dhir ee beerta furan ee guriga
Jardiin kasta iyo aqal walba waxay u qoondeeyeen dhismo cagaaran, oo ay ku jiraan dhir. Waa mawduuc muhiim ah oo salad cusub ah, oo la ilaaliyo, koorsooyinka koowaad iyo labaad. Si aad uhesho duurka cagaar cagaaran beerta, waxaad u baahan tahay inaad si haboon u daryeelto. Sida loo sameeyo tan waxaa lagu qeexay maqaalkan.
Qaababka dhirta si aad u dardargeliso bil kasta
Jidhka dumar kasta waa shakhsi, sidaas darteed wareegga bisha ee qaar ka mid ah ma aha mid deggan. Bil gudaheed, caadadu waxay bilaaban kartaa 24 maalmood, iyo mid kale, 30 maalmood kadib. Farqiga u dhaxeeya wareegga iyo, si waafaqsan, dib u dhac ku yimaadda caadada caadada 2-6 maalmood waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid caadi ah. Laakiin waxaa jira xaalado marka haweenku isku dayaan inay bil kasta ku soo wacaan hab kasta oo xitaa xawaaraan gelintooda.
Sida loo xareeyo coop digaag leh gacmahaaga
Jarmal Jarmal leh difaaca wanaagsan - Qoomamo kala duwan
Sida loo abuuro oo u koraan qajaarka noocyo "Cudurrada Shiinaha-adkaysi u leh"
In warshad sii kordhaysa - beerta iyo beeraha berry, ee beerista, floriculture kiciyaasha ugu fiican ee la tijaabiyey by sanado badan oo tababar ah ayaa loo isticmaalaa. Gaar ahaan lama huraan waa isticmaalka xaaladaha cimilada iyo cimilada cimilada inta lagu jiro xilliga gaaban ee dhirta. Ma taqaanaa? Mid ka mid ah waxyaabaha dheeraadka ah ee la isticmaalo ayaa ah daroogada "Pollen". Read More
"Alben" digaagga: sida loo bixiyo
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhir 2019